Ukujongwa kwakhona kokuKhanya kwiintanda, nguRicardo Martínez Llorca | Uncwadi lwangoku
Ngamanye amaxesha iincwadi ziza kuwe zikuthembisa ngeendawo ezintsha, ezinye zikukhuthaze, ezinye zikuxelela nge-adventure yobomi ngokwembono eyahlukileyo ngokupheleleyo, kwaye ezimbalwa ezibandakanya zonke ezi mpawu zingasentla. Ngethamsanqa, Ukukhanya kwiindawo eziqhekekileyo, nguRicardo Martínez Llorca Ngomnye wabo; ibali lobungqina elithabathela indawo ukuzisizela ngokwamkelwa, amaphupha okwenyani kwaye ajike uncwadi lobomi bethu lube ngumlinganiswa omnye kunokuba lwalunjalo I-Desnivel Award yoNcwadi ngo-2016.
Ukukhanya kwiZintanda: iSilver Surfer, iRansome, kunye noMlobi wayenento efanayo
Umlingiswa ophambili weLuz en las Cracks wazalwa enentliziyo enkulu kunalo lonke ihlabathi, iimeko apho ubomi bungekho ngaphandle kwamaphupha kunye neenjongo zokufezekisa. Ngapha koko, kubonakala kunyanzelekile ukuthobela bona. Kwenzekile kuSilver Surfer, isimilo esimangalisayo, oyeke ukuba likhoboka lokuba ngumthinjwa woMhlaba olangazelela umnqweno wobomi angaze abenabo, Ukuhlawulela, umlingiswa kwi-Shadow Line nguJoseph Conrad, oye wahlakulela ubugcisa bokwazi ixesha lokuphumla ngelixa ehlonipha intliziyo ebuthathaka, kunye nomlinganiswa ophambili kweli bali, osityhilela umbono womntu olinganiselweyo ngokwasemzimbeni kunye nokuziqhelanisa neemeko ezinjalo: kusasa kwigumbi lesikolo umzalwana angoozwilakhe, kwisibini esithandekayo, kuvavanyo oluhlala luhleli, kubusuku obuphazamisekileyo okanye ukuthanda imiceli mngeni emibini njengokunyuka nokuhamba ngokuchasene nobomi obufanelekileyo.
Kodwa kulo lonke eli bali asisodwa, kuba iLlorca ixhomekeke ukuthanda kwakhe uncwadi Ukufumanisa indlela yakhe yokuqala yokubhala, iincwadi ezamkhuthaza ukuba aphume apho kunye nezo zondla iintsuku zombalisi kwigumbi elijonge kuhola wendlela wezibane ezimnyama eziqinisekisa ubusuku bamawaka eenkwenkwezi. Kuba ukuKhanya kwiZintanda yingoma yobomi, kodwa ngakumbi ezincwadini.
Ukuhamba kukwakho: ukusuka edolophini elahlekileyo eBrazil okanye eCampeche ukuya kwiiAlps umbhali akhwela kuzo, edlula kwimimandla exotic yaseMpuma, yalawo madoda akhubazekileyo abalisa amabali kwivenkile eseLaos; zehlabathi apho umntu ngamnye atya ixesha lakhe ekhetha umoya afuna ukuwuphefumla.
URicardo Martinez Llorca
URicardo Martínez Llorca (Salamanca, 1966) waphumelela izifundo zobuGcisa kwaye wasebenza njengeweyitala kunye nentatheli de waba ngutitshala wokuzoba kwisikolo samabanga aphakamileyo, umsebenzi awenzayo ngoku kwaye udibanisa nomsebenzi wakhe njengomgxeki kuncwadi kumajelo eendaba afana neABC Cultural okanye La ILínea del Horizonte, ukongeza kwisikhokelo secandelo leNcwadi kunye nohambo lweCulturamas.
Amava akhe kwiindawo ezahlukeneyo zobuchwephesha angakhokelela ekuthandeni ukufunda okuya kuthi kukhokelele kwikhondo lomsebenzi omkhulu njengombhali, enemisebenzi esithoba epapashwe nguLlorca ukuza kuthi ga ngoku: iinoveli. Ukuphakama okuphezulu (inoveli yakhe yokuqala kunye nowokugqibela kumvuzo weTigre Juan), Indawo engenanto (Ibhaso likaJaén), Ikhephu lemimoya, Emva kwekhephu (owokugqibela ngembasa ye-Desnivel 2015) kunye neyokugqibela, Ukukhanya kwizikhewu, owaphumelela ibhaso le-Desnivel ka-2016. Le misebenzi ilandelwa yincwadi yamabali Oonyana bakaKayinIibali zamabali ahambahambayo Ibhanti yobhedu y Kwelinye icala lokukhanya, okanye incwadi yeprofayile Ixabiso lokuba yintaka.
Unokulandela uLlorca kwibhlog yakhe, Ukuphakama okuphezulu, kwaye ujonge Ukukhanya kwizikhewu Ukuze nawe ube ngabafundi balo msebenzi wobungqina endinawo umzuzu: lowo we protagonist ejongene nezinto zeAltai massif, eMongolia, ngexesha lobusuku bokuhamba. Umzekelo ogqibeleleyo womzabalazo oqhubekayo phakathi komntu, ukusikelwa umda kunye nendalo. Kule meko umlo othuleyo, onolwazelelelo. Njengoko kuchazwa njengayo nayiphi na enye.
Ukufundile ukuKhanya kwiintanda?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Uphengululo lokuKhanya kwiindawo eziqhekekileyo, nguRicardo Martínez Llorca
USherlock Holmes wonke umntu. Ubuso obuninzi bomcuphi owaziwayo